I-Raw Synephrine HCL powder (5985-28-4) hplc =98% | AASraw Fat Loss
/ iimveliso / I-Fat Loss powder / Synephrine HCL powder
SKU: 5985-28-4. Udidi: I-Fat Loss powder
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-mass order ye-Synephrine HCL powder (5985-28-4), phantsi kolawulo lweCGMP kunye ne-system control control quality.
I-powder Synephrine HCL i-alkaloid yendalo yamakhemikhali yendalo ifunyenwe izityalo kwaye ikhutshwe ukuze isetyenziswe. Is Wi-orange isityalo Funny ibihumbi Investment ulimi Nangona i-orange enomundu inomlinganiselo omkhulu wokusetyenziswa, i-synephrine sele isetyenziswe ngokusisiseko kwaye ifundelwe imiphumo yayo kwisisindo kunye nokulahlekelwa kwamafutha.
Ividiyo ye-Synephrine HCL ye powder
I-Synephrine hydrochloride powder ezisemqoka
igama: Synephrine hydrochloride powder
I-molecular Formula: C9H14ClNO2
Isisindo somzimba: 203.67
umbala: I powder crystal
Synephrine (CAS 5985-28-4) Ukuhlaziywa
Mamela, ngaba unqwenela ukutya okungekho nto ukukhusela ukuba ungene kulolu hlobo lwama-hourglass onqwenela ukuba nalo? Enye yezinto ozozenza ukuze ufumane umlinganiselo ongcono kakhulu ukulawula ukutya kwakho. Xa usenza oko, uya kuphumelela isiqingatha semfazwe. Zininzi iziyobisi kwiimarike eziye zaqulunqwa ukunciphisa ukutya. I-Syneprine yenye yezobisi. Kule Ukuhlaziywa kweSynephrine, uya kufumana ulwazi oluncedo malunga nalo myeza oye wathandwa kakhulu xa kufikelele ekulawuleni ubunzima.
Synephrine iyishukumisayo esinamandla esinesithintelo esinokutshisa kunye nesondlo. Kwakhona kunceda umzimba wakho ukuxhasa imetabolism enhle. Ezi zakhiwo zenza i-Synephrine inenzuzo kakhulu kubantu abagqithisileyo nabakhuluphele kunzima ukunciphisa ukutya nokunciphisa umzimba. Ngokuqhelekileyo kuthengiswa ngefomati 'ityuwa' ebizwa ngokuba yimpu Synephrine HCL.
I-Synephrine ifumaneka kakhulu kwiintlobo ezahlukeneyo ze-citrus. Nangona ikhona kwiintlobo zombini ze-orange ezinomsoco kwaye ezibuhlungu, zininzi kakhulu kwiintlobo ezibuhlungu. Olunye uphononongo olubandakanya ngaphezu kwe-50 ngesandla-olucinywe ngesandla kunye nolungiso lwe-citrus fruit juices, i-synephrine (i-CAS 5985-28-4) manqanaba atholakala kwi-4-60 mg / L.
Iipropati zeMichiza zeSynephrine
I DRUG IIKHIKIMI ZAMAZIKO PHYSICAL
UKUBALULEKILEYO ISICWANGCISO IFOMU YOKUBHALA
Crystaline Solid C9H13Hayi2
Inani leCAS 94-07-5
I-Mass Mass 167.21 g / mol
Indawo yokunyibilika 162 ku-164 ° C (324 ku-327 ° F
Indlela yokuSebenza yeSynephrine
I-P-synephrine ivela ngokwemvelo emzimbeni womntu, kwaye ngokuqhelekileyo i-metabolized by enzyme engqondweni eyaziwa ngokuba yi-Monoamine oxidase enzymes. Ezi zi-enzyme zifana nazo ezilawula amanqanaba e-dopamine, i-serotonin kunye ne-norepinephrin.
I-Synephrine ikholelwa ukuba ifuthe kwi-adrenal system yomzimba womntu kunye nokunyusa izinga lokunciphisa umzimba, elifikelela kwipesenti ze-70 zekroriki yakho yansuku zonke. Ngokwezicwangciso, esi sithako sinceda ukukhawulezisa imetabolism yakho, oko kukukhokelela ekulahlekelweni kweoli kunye nokulawula ubunzima.
I-Synephrine ifana ne-pseudoephedrine kunye ne-ephedrine, eziyi-compounds ezitholakala kwiindidi ezahlukahlukeneyo zamanqaku omzimba / amayeza okubanda, ukuxhaswa kwamandla kunye nokunciphisa umzimba. Into enhle malunga ne-synephrin kukuba iyakwandisa ngokuphumelelayo umlinganiselo we-metabolism yomzimba ngaphandle kokubonisa nayiphi na impembelelo kwingcinezelo yegazi kunye nentliziyo yakho. Ngenxa yolu, kuthethwa ngokubanzi ukuba yiyona ndlela efanelekileyo kwi-ephedrine.
I-Synephrine inomlando omde, kwaye isetyenziswe njengesityalo semithi yonke eMpuma Afrika kunye neAsia yeTropiki kwiminyaka emininzi. Sekude kusetyenziswe njengonyango lokunyanzeliswa, ukuzithemba, isicupunu, kunye neentlungu.
Namhlanje, i-Synephrine isetyenziswa kakhulu kwimiphumo evuselelayo. Iqulethe iikhemikhali zobuchopho kwaye ivuselele i-metabolism enceda ekulawuleni ukutya, ngakumbi i-carbohydrates. Emva kokuba uthathe isisindo sokulahlekelwa isisindo esine-synephrine, uya kuziva uzixakekile kwaye udle ngaphantsi, ngoko ugcine ukugcina ubunzima obunempilo.
Enye indlela i-synephrine eyenza ngayo ukulahleka kwesisindo kukuba ivuselela i-thermogenesis kwaye iyatshisa umzimba wakho ukutshisa amanqatha angafunekiyo. Ngaphandle kokuncedisa ukutshiswa kwamafutha amaninzi, ukunyusa kwakhona kuphephe ukugcinwa komzimba. Ngokusebenzisa izithako ezongezelelweyo eziqulethe isithako esingokwemvelo ngokuqhelekileyo, uya kukwazi ukulahlekelwa yi-fat faster.
Uphando luye lwalunxibelelanisa unxibelelwano phakathi kokukhuluphala nokuxinezeleka. Ukongezelela ekuncediseni abantu abagqithisileyo nabakhuluphele kunzima, i-synephrine ifumanekile ibe yongqinisiso lwengqondo. Oku kuncedisa ngakumbi kwabo baxinezelekileyo, ukuxinezeleka, okanye nayiphina ingxaki enxulumene nesisindo.
I-Synephrine (i-CAS 5985-28-4) Isilinganisi
Kubantu abaninzi, i-10-20 milligrams ithathwa kathathu ngosuku. Nangona kunjalo, umyinge we-50 milligrams (nangona kungabi kathathu ngosuku) unokunconywa kwabanye abantu.
Kwisifundo esinye, umthamo owodwa we-50 milligrams we-synephrin ufunyenwe ukuphucula umlinganiselo we-basalelic nge-65 calories. Ngaphambi kokusebenzisa i-synephrin, kukulungele ukubonisana nogqirha wakho kumyinge oza kukusebenzela.
Kanye njengokuba kuninzi kunye ne-supplementary, awuyi kubona enkulu xa uqala ukusebenzisa i-synephrine. Iziphumo ezigqwesileyo zinokubonakala kuphela emva kokusetyenziswa okuqhubekayo. Uninzi lwabantu lubonisa ukwanda kancinci kwamandla ngaphandle kweminye imiphumo echaphazelekayo ngokubanzi ehambelana nezikhuthazo, njengentliziyo yokukhawuleza, isicaphuse, i-jitters, njl njl.
Ukuqapha xa uthatha iSynephrin
Musa ukuthatha i-dose ephakanyisiweyo yansuku zonke: Ngokukhawuleza ukufumana iziphumo ezikhawulezayo, unokulingwa ukuba udle i-synephrine engaphezulu kune-dose ephakanyisiweyo. Ukusebenzisa i-synephrin engaphezulu kunokunyuswa kwengozi yemiphumo emibi njengentloko kunye nesisu.
Musa ukudibanisa i-synephrine kunye nezinye izikhuthazo: I-Synephrin inamandla kakhulu, ngoko ukudibanisa nezinye izikhuthazo kunokubangela iziphumo ezibi kakhulu. Ukusebenzisa kunye namanye amacandelo afana ne-PEA okanye i-ephedrine inokubangela izingozi zempilo ezifana nokuphelelwa amandla, ukuboshwa kwentliziyo kunye nokunyuswa kwegazi.
Musa ukuthatha i-synephrine ukuba unesifo sengqondo esiphezulu: Ukuba unengxaki yegazi eliphezulu, i-HIV / AID okanye nayiphi na isifo esibalulekileyo, kukulungele ukuthatha i-synephrin. Oku kungenxa yokuba isongezelelo sinokusebenzisana kunye / okanye ukusebenzisana namachiza onokuthatha ukuthatha / ukulawula imeko yakho.
Ngenxa yeziphumo ezinobungozi ezibangelwa kukudibanisa kwe-synephrin (5985-28-4) kunye nezinye iimveliso, kulungile ukuthenga ifom ye-Synephrine ekhoyo. Gweba abathengisi abasebenzisa izitya okanye baxube i-synephrine kunye nezicaka ezifana ne-ephedrine okanye i-caffeine.
Yintoni ongayenza xa Ugqithisa kwi-Synephrine
Ukuba uthetha ngaphezulu kwe-synephrin kune-dose yemihla ngemihla ekhuthazwayo, unokufumana iimiphumo zesifo se-synephrine ezifana nesantya senhliziyo esheshayo, isifo, intloko yesisu, isisu, njl. Xa uthe wagqitha ngaphezu kwe-synephrin, kubalulekile ukufuna unyango lwengxamisekileyo kwangoko . Ngaphandle koko, unokubiza umnxeba woNcedo lweNetyhe kwi-1-800-222-1222.
Isiphetho se-Synephrine HCL
Njengoko kulindeleke ukusuka nasiphi na isishukumisayo esichukumisayo esandisa imetabolism, inzuzo eyintloko ye-synephrine yongezelela ukulahleka komzimba. Ukudibana nokutya okufanelekileyo kunye nokuzivocavoca rhoqo, i-synephrine inokukunceda ukuba ube nomzimba opheleleyo kwaye ugweme iingxaki ezinxulumene nesisindo ezifana nokunyuka kwengcinezelo yegazi, iingxaki zeentliziyo, njl njl.
Stewart, WF Newhall, kunye noG. Edwards (1964). "Ukuzihlukanisa kunye nokuchongwa kwe-synephrine kumaqabunga kunye neziqhamo zeCitrus." Biol. Chem.239 930-932.
A. Swinehart, kunye ne-FR Stermitz (1980). "I-Bishordeninyl terpene alkaloids kunye nezinye izakhiwo Zanthoxylum culantrillokwaye Z. coriaceum. Phytochemistry 191219-1223
Kusu, X.-D. ULi, noK. Takamura (1992). "Ukunqunywa kwe-synephrine kunye ne-N-methyltyramine kwiZhishi kunye neZhike (izithelo ze-Citrus ezindala) nge-high-performance liquid chromatography ene-electrochemical detection." Chem. UFaro. Bull.40 3284-3286.